🥇 ▷ way ka iibin karaan 'Mate 30' kan Android ✅
way ka iibin karaan ‘Mate 30’ kan Android
Akhbaar xun ee Huawei. Qorshayaasha bilaabaan Mate 30 oo leh Android awood uma yeelan doonaan inay run noqdaan tan iyo markii ay shirkada Shiinaha laga leeyahay sharci uma lihin inaad isticmaasho nidaamka hawlgalka marinkaaga xiga.
Afayeen u hadlay Google ayaa yidhi Reuters waa maxay Mate 30 laguma iibin karo barnaamijyada Android iyo Google ee isku dhafan, maadaama xannibaadda uu soo rogay Mareykanka ay ka horjoogsaneyso inay siiso ruqsad Huawei.
Dib u dhigista ay dowlada Mareykanka siisay ruqsada ku meel gaarka ah ma khusayso alaabada cusub, sidaa daraadeed Huawei Mate 30 looma ogola in lagu iibiyo Android. In kasta oo shirkadaha wadankaas ay codsan karaan liisan si ay alaabada uga iibiyaan Huawei, codsiyada midkoodna lama oggola by xafiiska dawlada.
Tani waxay gelineysaa Huawei dhibaato weyn, yaa yiri waxay u isticmaali doontaa nidaamkeeda hawlgalka – Harmony OS – iyo deegaanka haddii dowladda Mareykanka aysan kuu oggolaan doonin inaad sii waddo adeegsiga qalabka Android.
Huawei wuxuu doonayaa in taleefannadiisa ay ku bilaabaan Android
Aad u badan Google sida Huawei waxay rabaan taleefannada soosaaraha Shiinaha inay ku shaqeeyaan ka hoos shaqeeya Android. Maamulayaasha sare ee shirkadda Shenzhen waxay muujiyeen inay rabaan in Terminalyadooda cusub lagu saleeyo Android joogteynta heerka, deegaanka iyo teknolojiyadda.
Furitaanka Mate 30 oo aan lahayn Android waxay noqon lahayd guuldarro xagga iibka ah
Isla aasaasaha Huawei, Reng Zhengfei, wuxuu sheegay in guusha Harmony OS ay ku xirnaan doonto jawiga deegaanka ee barnaamijyada sida iOS iyo Android. Tani waa wax aan lagu guuleysan sanad ama laba, sidaa darteed tuur Mate 30 oo leh nidaamka cusub ee hawlgalka waxay ka dhigan tahay guuldarro marka laga hadlayo iibka, sida falanqeeyayaasha qaar ay filayaan.
Huawei waxaad isticmaali kartaa nooca isha furan ee AndroidSi kastaba ha noqotee, adeegyada Google iyo codsiyada lama heli doono maaddaama shatiga looga baahan yahay in la dhaqan galiyo.
Huawei ayaa leh qorshayaal joogo Mate 30 on September 19 ee Europe. Wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan inay la imaanayso processor-ka awood badan ee Kirin 990, oo ah chip-ka bilaa-waanta ah maadaama Huawei uu haysto rukhsadaha ARM.
Waxaa sidoo kale la sheegay in nooc Lite ah oo taleefan ah oo leh Harmony OS la soo bandhigi doono, in kasta oo macluumaadkii ugu dambeeyay istaraatiijiyadani ay is beddeli karto.